Ahoana no hifehezana ny tebiteby ho azy ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Ahoana no hifehezana ny tebiteby ho azy
Ahoana no hifehezana ny tebiteby ho azy. La fanahiana Toetran'ny tahotra voajanahary izay niaretantsika rehetra tamin'ny fotoana iray. Na izany aza, arakaraka ny anjara asany eo amin’ny fiainantsika, dia mety ho fihetseham-po mahazatra, aretina, na aretin-tsaina.
Amin'ny teny hafa, indraindray mitebiteby isika rehetra, na noho isika hanao zavatra izay mbola tsy vitantsika hatrizay, hanolotra asa, fivoriana lehibe, sns. Na izany aza, rehefa manimba ny fiainana andavanandron'ny olona iray ny tebiteby, tsy mahavita manao asa andavanandro ary miteraka fijaliana ara-pihetseham-po, dia azo lazaina fa lasa zavatra tena matotra izany.
Mba tsy hivoahana ho fikorontanana ara-tsaina ny tebiteby, izany Zava-dehibe ny mahafantatra ny soritr'aretinao ary manova ny fomba iatrehanao. Noho izany antony izany indrindra, avy amin'ny Discover.online, efa nanomana ny sasany izahay torohevitra hanampy anao hitantana ny tebiteby , mahatonga anao hanana fiainana voalanjalanja kokoa isan'andro ary manampy anao hisoroka olana lehibe kokoa amin'ny ho avy.
1 Ahoana ny fitantanana ny tebiteby voajanahary: toro-hevitra mahasoa
1.1 1. Mandamina ny fanaonao andavanandro
1.2 2. Fantaro ny tenanao
1.3 3. Miezaha hahatakatra ny eritreritrao sy ny fihetseham-ponao
1.4 4. Fehezo ny fofonainao
1.5 5. Aoka ianao hanana eritreritra ratsy
1.6 6. Misotroa misotro toaka ary tandremo ny zavatra manaitaitra
1.7 7. Tandremo manokana ny sakafo
1.8 8. Manaova fanatanjahan-tena
1.9 9. Mitadiava fialam-boly na asa mahafinaritra.
1.10 10. Mialà amin'ny hetsika mampanahy
1.11 11. Aza mieritreritra ny hoavy amin'ny fomba tafahoatra
1.12 12. Omeo lanja ny firaiketam-po ary halaviro izay mandratra
1.13 13. Mitandrema amin'ny alikaola, paraky ary marijuana
1.14 14. Saintsaino
1.15 15. Aza atao tsinontsinona ny torimasonao
1.16 16. Manantona psikology na mpitsabo aretin-tsaina
2 Ahoana no hifehezana ny tebiteby ho azy
Ahoana ny fitantanana ny tebiteby voajanahary: toro-hevitra mahasoa
La fanahianaraha mbola tsy lasa korontana dia mety mifehy raha ampidirintsika amin'ny fahazarantsika ny fahazarana sasany. Noho izany dia tsy maintsy fantarina inona no antony manetsika azy. Noho izany antony izany dia manoro hevitra anao izahay hamaky tsara ny torohevitray ary hiezaka ny hizaha toetra azy tsirairay mandra-pahitanao ny antony mahatonga an'io ahiahy io.
1. Mandamina ny fanaonao andavanandro
Mandamina ny fanaonao andavanandro
La fahavalon’ny tebiteby ny fandaminana. Rehefa milamina tsara ny zava-drehetra, mahafantatra tsara ny tokony hatao sy ny toerana tokony hijerena, dia mandeha tsara ny zava-drehetra. Raha tsy izany, dia ho eo afovoan'ny zavatra maro tokony hatao ianao izay mety haka ampahany mampatahotra, lehibe lavitra noho ny tena izy. Noho izany, miezaha handamina ny asanao amin'ny fandaharam-potoana hanana fifehezana tanteraka ny andronao isan'andro.
Zava-dehibe koa ny manamarika izany Tsy mifototra amin'ny fanirianao hifanaraka amin'ny fandaharam-potoananao ny tontolonao manontolo. Indraindray dia mitranga ny tranga tsy ampoizina ary mila mahafantatra ny fomba hiatrehana izany ianao. Ny hoe voalamina dia tsy hoe mpanara-maso, mitadiava fahalalana mba handresena ireo sakana tsy voafehinao.
2. Fantaro ny tenanao
Tena mitovy amin'ny lafiny maro isika, saingy samy manana ny fomba fisainany sy ny ataony ny tsirairay. Noho izany dia ilaina ny mahafantatra ny tenanao. Aza mijery ny hafa vao hahalala izay tokony hatao. Jereo ny tenanao ary ianaro ny fomba fihetsikao sy ny fitantananao zavatra.
Noho izany, dia fomba tsara ihany koa fantaro hoe inona no mahatonga ny fanahianao , izany hoe ireo toe-javatra mety manondro toe-javatra mampiahiahy. Amin'izany fomba izany dia afaka mamaha ireo toe-javatra ireo amin'ny traikefa bebe kokoa ianao ary manova ny fahazarana sasany hanatsarana ny fiainanao.
3. Miezaha hahatakatra ny eritreritrao sy ny fihetseham-ponao
Fanatanjahan-tena tsara ny miresaka amin'ny tenanao . Isaky ny mahatsapa fihetseham-po ianao, dia miezaha hahatakatra ny antony nahatonga azy hamantatra hoe inona no mifandray amin'io toe-pihetseham-po io.
Na izany aza, aza mangataka na manontany tena foana momba ny zavatra tsapanao. Tsy maintsy misy fifandanjana eo amin'ny faniriana hahatakatra sy ny manontany tena.
4. Fehezo ny fofonainao
Fehezo ny fofonainao
La Ny fofonaina dia iray amin'ireo teboka manan-danja indrindra amin'ny tebiteby . Ny fifehezana ny fofonaina dia manana ny fahafahana mampirisika na mamarana ny fanafihan'ny tebiteby, dia tena mahery. Noho izany, rehefa mahatsapa ianao fa eo ambanin'ny taham-pisefoana haingana dia haingana, miezaha hampihena ny hamafin'ny fofonainao. Mifoka rivotra ary mifoka lalina hifandray amin'ny tenanao ary tsy ho voarebirebin'ny toetry ny tebiteby.
5. Aoka ianao hanana eritreritra ratsy
Amin'ny ankapobeny, ny Ny fanahiana dia mitondra eritreritra ratsy maromaro, fa ny zava-drehetra dia tsy mety ary ny ratsy indrindra no hitranga, fa matetika, dia ny fiheverana tafahoatra fotsiny ny tahotra ny tenany.
Rehefa tonga ao an-dohanao ny eritreri-dratsy, dia aza matoky azy ireo ary apetraho amin'ny tena mety, tsy manahy ny amin'izay mety ho nisy na mety ho nisy.
6. Misotroa misotro toaka ary tandremo ny zavatra manaitaitra
Ny kafe dia tsara amin'ny fanomezana hery anao sy fampakarana fanampiny amin'ny maraina, mampitombo ny fifantohana. Manimba anefa ny fisotroana kafe be loatra, satria zava-pisotro mampatahotra mivantana. Rehefa afaka ora iray , andramo soloina ny kafe amin'ny voasarimakirana na dite chamomile. Tena fahazarana tsara ho an'ny fahasalamanao ara-tsaina izany.
7. Tandremo manokana ny sakafo
Ho an'ny olona mitebiteby, matetika ny fitadiavana fialofana amin'ny sakafo mba hanamaivanana ny fihenjanana. Sakafo mamy sy be matavy mamoaka tryptophan, tena ilaina amin'ny asan'ny serotonine (hormone fahafaham-po).
Na izany aza, be dia be ny sakafo ara-pahasalamana miaraka amin'ny fatrany tryptophan, toy ny trondro manankarena amin'ny omega-3s, ny menaka, ny atody ary ny sôkôla mainty aza.
8. Manaova fanatanjahan-tena
Tadiavo ny asa ara-batana tianao indrindra ary ampiharo izany mba hampitombo ny fahasalamana sy ny fahasalaman'ny vatanao. Ny fanazaran-tena manampy mifehy ny tebiteby, mba hanafahana ny fihenjanana, manome fialan-tsasatra bebe kokoa ary manatsara ny tahan'ny fo.
Azonao atao ny mandeha an-tongotra, jogging, milomano, manao gymnastique, na ao an-trano na any ivelany: ny zava-dehibe dia ny misafidy hetsika azonao atao in-telo isan-kerinandro. Ny tombony dia lehibe!
9. Mitadiava fialam-boly na asa mahafinaritra.
Mila manana isika hetsika mampitony antsika Ary ny iray amin'ireo hetsika ireo dia azo avy amin'ny fialamboly. Amin'izao fotoana izao, misy fomba tsy manam-petra hitadiavana sy handalinana ny fialam-boly rehetra amin'ny alàlan'ny horonan-tsary YouTube na vondrona facebook ankoatra ny hafa. Mitadiava hetsika tianao indrindra ary ataovy amin'ny fotoana malalaka!
Raha mbola tsy nahita ny anao ianao, manokana fotoana ao anatin’ny andro na herinandro hanaovana zavatra tena tianao. Tena sarobidy tokoa ity fotoana fandosirana ity.
10. Mialà amin'ny hetsika mampanahy
Misy hetsika sasany izay miteraka fanahiana be dia be. Tsy maintsy misoroka azy ireny isika na mitady fomba vaovao hanaovana azy ireny, hanalefahana ny fahasimban'ny fahasalamantsika ara-pihetseham-po. Noho izany, andramo ny mandinika ireo hetsika izay manampy amin'izany ary misoroka na manova azy ireo.
11. Aza mieritreritra ny hoavy amin'ny fomba tafahoatra
Ny iray amin'ireo toetra fototry ny fanahiana dia ny fieritreretana be loatra momba ny ho avy, ny fanaovana ny asa rehetra amin'izao fotoana izao mieritreritra ny ho avy. Mba hifehezana izany, ny Afaka manampy anao ny fifantohana amin'ny ankehitriny.
Ny fanazaran-tena dia ampy ny manao hetsika sasany mahatsapa ny vatanao, ny fofonaina sy ny toe-pihetseham-po, amin'ny fiheverana tsara ny ankehitriny. Isaky ny manandrana mandeha any amin'ny ho avy ny sainao dia avereno amin'ny alalan'ny fahatsapana ny ankehitriny. Manafaka izany!
12. Omeo lanja ny firaiketam-po ary halaviro izay mandratra
ny fanohanana harato Tena ilaina ny mifehy ny tebiteby ary koa ny mitsabo izay mety ho fikorontanana ara-tsaina. Ny fananana olona azo ianteherana, na namana na fianakaviana, dia tena zava-dehibe ny fifamatorana sy ny fanomezana lanja ireo akaiky anao.
Zava-dehibe ihany koa ny mijanona lavitry ny olona tena manahy na ratsy izay mety hisy fiantraikany mivantana amin'ny toetry ny fihetseham-ponao. Mety ho toa henjana izany amin'ny voalohany, saingy ity fialana ity dia hanampy anao amin'ny fikatsahanao ny fifehezana ny tebiteby.
13. Mitandrema amin'ny alikaola, paraky ary marijuana
Ireo akora rehetra ireo dia manimba ny fihinanana tafahoatra. Na dia toa mampirisika ny olona ho amin'ny fialan-tsasatra vetivety aza ny zava-drehetra, dia tsy maharitra ela ny fisehoan-javatra mifanohitra amin'izany.
El toaka Mety hahatonga anao ho euphoric izany ary avy eo miala sasatra, saingy lasa etona izany fahatsapana izany ary ny ampitso, ny tebiteby dia mety ho lehibe. Toy izany koa ny amin'ny marijuana, izany, na dia eo aza ny fanentanana ny fialan-tsasatra, Mety hiteraka fanahiana sy fanafihan-tahotra mihitsy aza izany, ka vao mainka mampitombo ny tebiteby.
La tena manampy amin'ny fifehezana ny tebiteby ny fisaintsainana . Alohan'ny hiheveranao fa tsy ho vitanao izany, andramo fa maro ny olona diso hevitra momba ny atao hoe fisaintsainana.
Mifanohitra amin’ny hevitry ny maro, ny fisaintsainana dia tsy hoe manafoana ny lohanao , fa mieritreritra ny amin'izao fotoana izao sy ny tenanao, ao anatin'ny fotoana fohy, ny fialan-tsasatra sy ny fifehezana ny fofonaina.
Amin'izao fotoana izao dia azo atao ny mijery horonan-tsary manampy anao amin'ny fisaintsainana, ary koa ny fananana fampiharana sy podcast hanaovana fisaintsainana voatarika. Mahagaga ny vokatra!
15. Aza atao tsinontsinona ny torimasonao
Betsaka ny olona mamela ny nofinofiny any ambadika, ho zavatra tsy misy dikany. Ny vokatra dia andro reraka sy manahy kokoa, ao anatin'ny tsingerina izay miverimberina matetika.
Mba hatory indray, andramo ampidiro ny fahazarana ny fahadiovana torimaso, izay azo oharina amin’ny miborosy nify. Ataovy izany satria ilaina izany, manana fofonaina tsara ary tsy misy lavaka. Miaraka amin'ny nofy dia mitovy.
Mandamina ny ora fatorianao, ataovy milamina tsara ny efitranonao, aleo maizimaizina sy mangina rehefa matory, misoroka ny fihinanana sakafo be loatra na manao fihetsiketsehana ara-batana vao hatory. Inona koa, aza mijery tele ary aza mitondra ny findainao hatory fahazarana tena tsara izany.
Amin'ny fanaovana izany, rehefa mandeha ny fotoana, dia hihamamokatra kokoa ny alina hatorianao ary hahatsapa ho vonona sy vonona kokoa ho an'ny ampitso ianao, hialana amin'izany fahatsapana reraka tsy tapaka izany.
16. Manantona psikology na mpitsabo aretin-tsaina
psikology na psychiatrist
Ny fampiasam-bola amin'ny fahasalamanao ara-tsaina dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra fikarakarana manokana. Ireo izay mitady ireo matihanina ireo dia manao izany amin'ny tanjona hanatsarana ny kalitaon'ny fiainany sy ny fitsarana an-tendrony amin'io lafiny io dia tokony hijanona amin'ny lasa. Rehefa dinihina tokoa, dia afaka manampy na iza na iza hanova ny fitondran-tena sasany izay mety hampitombo ny fahasalamany sy hanatsara ny fifandraisany amin'ny olona amin'ny fomba tena tsara.
Raha manahy be loatra ianao ka tsy azonao antoka izay tokony hatao hampitony azy, mpitsabo aretin-tsaina na psikology no ho namanao akaiky indrindra ity fotoana ity.
Aza kivy. ny fifehezana tebiteby Azo atao ny manova ny fahazarana kely izay mitondra tombontsoa lehibe kokoa. Na izany aza, misy toe-javatra izay tsy maintsy ataon'ny mpitsabo aretin-tsaina mba hanamaivanana ny soritr'aretin'ny tebiteby voalohany ary hamaha olana hafa miaraka amin'ny marary rehefa mandeha ny fotoana.
Koa raha manahy be loatra ianao dia aza misalasala manomboka mahatsapa tena sy manova ny fahazaranao. Ny fiovana voalohany dia mety ho fangatahana fanampiana fotsiny.
Manantena izahay fa ity lahatsoratra ity momba ny ny fomba hifehy ny tebiteby ho azy nahasoa anao. Raha te-hanohy hianatra fika hanatsarana ny lafiny sasany amin'ny fiainanao andavanandro ianao dia manoro hevitra anao izahay hanohy ny fitetezana Discover.online.
Ny fomba hahitana vokatra kokoa amin'ny asa
Inona no maha samy hafa ny fanahy sy ny fanahy